Misotroa sy mitondra fiara | Orinasa Mpampanoa lalàna
Mety misy antony maromaro amin'ny lozam-pifamoivoizana mitranga eny an-dàlana miainga avy amin'ny làlana ratsy ka mankany amin'ny toetr'andro ratsy. Na izany aza, ny mitondra fiara eo ambany fitarihan'ny alikaola na zava-mahadomelina hafa dia antony mahazatra amin'ny lozam-pifamoivoizana izay mora voaro amin'ny fametrahana fifehezan-tena kely.
fiantraikany amin'ny alikaola na zava-mahadomelina hafa
antony mahazatra amin'ny lozam-pifamoivoizana
Raha sendra misy toe-javatra toy izany ianao, dia tsy maintsy manakarama mpisolovava lozam-pifamoivoizana mamo any Dubai ianao hialana amin'ny loza ratsy indrindra.
Ny fandeferana Zero amin'ny fisotroana mamo any UAE
Ao UAE, heloka be vava ny mitondra fiara noho ny fisotroan-toaka toy ny alikaola na zava-mahadomelina satria misy ny politika tsy misy fandeferana. Raha ny marina, na dia ny fisotroam-bahoaka aza dia heverina ho tsy manara-dalàna.
Araka izany, ny mpampanoa lalàna iray dia afaka mametraka raharaha iray amin'ny mpamily mamo, na dia tsy ekena aza ny haavon'ny toaka hita ao amin'ny vatana. Ny lalàna henjana toy izany dia ampiasaina mba hampihenana ny haavon'ny lozam-pifamoivoizana mamo.
Raha ny tena izy, ny olona voakasiky ny lozam-pifamoivoizana mamo dia misafidy ny hisotro sy mitondra fiara na dia rehefa fantany aza ny mety ho vokatr'izay mety hijaly sy ny loza mety haterany. Noho izany, ny governemanta dia tsy maloto amin'ny mpamily mamo.
Ahoana ny fomba fahazoan-dàlana amin'ny alikaola any Dubai
Afaka mahazo fahazoan-dàlana amin'ny alikaola ianao any Dubai fa tsy Silamo ianao. Na izany aza, tsy maintsy mahafeno ireto fepetra manaraka ireto ianao:
Tokony ho 21 taona mahery
Tokony mahazo karama farafahakeliny karama Dh 3,000
Tsy maintsy manana visa fonenana
Tsy tokony ho Silamo
Azonao atao ny mahazo ny takelaka fangatahana amin'ny alàlan'ny tranokala fivarotana zava-pisotro misy alikaola Maritime sy Mercantile International na Afrikana + Atsinanana na handray ny kapila mafy avy amin'ireo magazay. Ankoatra ny famenoana ilay taratasy dia tsy maintsy apetraka ireto antontan-taratasy manaraka ireto:
Taratasy fanamarinana karama
Kopikin'ny pasipaoro, fifanarahana hofan-tany, visa visa
Ny fandoavam-bolan'ny Dh 270 na izay azo ampiharina mandritra ny vanim-potoana fandefasana
Sarin'ny fifanarahana momba ny asa na amin'ny teny anglisy na arabo
Raha misy ny mpivady, ny lehilahy ihany no mahazo manao fangatahana raha tsy mahazo ny NOC ny vadiny. Ny olona miasa tena dia tsy maintsy mametraka kopia ny fahazoan-dàlana ara-barotra. Mba hahazoana ny fahazoan-dàlana amin'ny alàlan'ny orinasanao, ny mpampiasa sy ny mpangataka dia tsy maintsy misoratra anarana ary manindrona ilay fangatahana. Matetika maimaim-poana ny fametrahana ny fangatahana.
Inona no sazy amin'ny fisotroana sy fametrahana fiara any Dubai?
Ny sazy amin'ny fisotroana fiara sy ny famononam-bola any Dubai dia mety hahasarika ny lamandy eo amin'ny AED 5,000 ka AED 50,000, ny fanagadrana eo anelanelan'ny 1 ka hatramin'ny 3 volana, na ny roa tonta. Fanampin'izay, mety ho foanana na esorina mandritra ny roa taona mahery ny fahazoan-dàlana mitondra anao. Mety ho very mihitsy aza ny asanao, arakaraka ny andininy faha-120 ao amin'ny lalàna momba ny asa any UAE.
Misotroa ary esory ny sazy
Arakaraka ny hamafin'ny lozam-pifamoivoizana, ny olona iray voakasiky ny lozam-pifamoivoizana mamo dia mety hiharan'ny vokam-pifamoivoizana lehibe ary manimba ny asany. Ny fomba tokana hampihenana ny fahasimbana dia ny fitadiavana fanampiana matihanina. Ny mpisolovava lozam-pifamoivoizana iray dia afaka mamonjy anao raha tsy fahadisoana ianao ary mitazona antoko hafa izay nitana anjara mivantana na ankolaka mba hampiala ny tsiny kely ho fiarovana anao.
Afaka manome anao ny tari-dàlana sy torohevitra ilaina rehetra ianao
Azonay mpisolovava 24 ora isan'andro, fito andro isan-kerinandro mba hanampiana anao amin'ny raharaha.